Zvemagariro Midhiyavanhu | Martech Zone
Ini handina chokwadi chekukosha chaiko kwekutarisa huwandu hwevanhu nevezvenhau saiti kana kupinda uye kusiana kwenzvimbo dzemasocial media dzakapararira. Icho chokwadi ndechekuti iwe unogona kuwana homwe dzetarisiro kana maindasitiri pundits mune ese iwo. Ini ndinofungidzira kuti zvinonakidza kuona kuti pane nuances mune huwandu hwevanhu hwakavakirwa papuratifomu, zvakadaro.
Munyika yakakwana, chiratidzo chako chinogadzira huvepo pane yega yega netiweki inowanikwa uye inodonhedza muzvikamu zveimwe neimwe. Zvichienderana nezvako zviwanikwa, izvo zvinogona kunge zvisingaite, saka sarudza ako maratidziro zvine hungwaru, uye wozoshandisa iwo mazhinji ipapo. Michael Patterson, NyukaSocial
Kubva ku Social Media Demographics Kuzivisa Nani Zvirongwa Zvikamu:
58% yevakuru vanoshandisa Facebook. Facebook huwandu hwevanhu hunogona kuwanikwa paVateereri Vhezheni.
23% yevakuru vanoshandisa LinkedIn. LinkedIn huwandu hwevanhu hunogona kuwanikwa pane iyo LinkedIn Press Peji.
22% yevakuru vanoshandisa Pinterest. Pinterest huwandu hwevanhu hunogona kuwanikwa mu Pew Yekutsvagisa Center Demographics yeKiyi Yemagariro Networking Mapuratifomu.
21% yevakuru vanoshandisa Instagram. Instagram huwandu hwevanhu hunogona kuwanikwa mu Pew Yekutsvagisa Center Demographics yeKiyi Yemagariro Networking Mapuratifomu.
19% yevakuru vanoshandisa Twitter. Kushandiswa kweTwitter uye ruzivo rwevanhu kunogona kuwanikwa pane iyo Twitter Kambani Peji.
Tiri zvakare kusanganisira yazvino Zvemagariro midhiya shanduko vhidhiyo kubva Erik Qualman, munyori weSocialnomics.
Tags: Erik Qualmannfacebook huwandu hwevanhugoogle pamwe nehuwandu hwevanhuzvakabatanidzwaonline mbapinterest huwandu hwevanhuchikwiriroreddit huwandu hwevanhusnapchat huwandu hwevanhuevanhu vezvenhaupasocial media demographic infographicmagariro enhausocial media shandukotwitter huwandu hwevanhu
Iko kune Ton Yekukosha kweB2B muSocial Media
Iyo Nyika yeSocial Media Kushambadzira 2015